Iyo Yega theme iyo yauchazomboda yeiyo WordPress: Avada | Martech Zone
Iyo Yega theme iyo yauchazomboda yeWordPress: Avada
Chipiri, April 17, 2018 China, Gumiguru 29, 2020 Douglas Karr
Kwemakore gumi, ini ndanga ndiri pachangu ndichigadzira tsika uye ndakaburitsa plugins, ndichigadzirisa nekugadzira madingindira etsika, uye kugadzirisa WordPress kune vatengi. Chave chiri chinotenderera uye ndine maonero akasimba kwazvo nezve kumisikidza kwandakaita kumakambani makuru nediki.
Ini ndanga ndichitsoropodzawo vavaki - plugins uye madingindira anogonesa zvisina kudzivirirwa kugadziridzwa kune saiti. Ivo kubiridzira, kazhinji vachiwedzera zvakanyanya saizi yemapeji ewebhu saiti uchidzora saiti zvakanyanya. Mazhinji ebasa ratinoita patinotora basa rekusimudzira webhu kune vatengi ndere kubvisa maridzi uye mu-mutsetse kodhi isingoregedze saiti pasi chete uye zvakare inotadzisa kugona kwekambani kuita shanduko kune yavo saiti.
Gamuchirai Musoro Fusions 'Avada
Dingindira Fusion yakavaka nekuvimbika iyo yakanakisa theme uye plugin musanganiswa wandati ndamboshanda neyavo # 1 inotengesa theme yenguva dzese, Avada. Iyo yakatendeseka yakanyatsogadzirwa zvekuti ini ndiri kuitisa kune yega yega imwe yemasaiti angu uye kune yega yevatengi vangu. Chimwe nechimwe chezvinhu zvekuvaka chinobvumira kushomeka kushomeka - chimwe chinhu chaunonyatsoda kukiya pasi kuti udzivise mutengi kana mupepeti anodzvinyirira kugadzirisa chiratidzo chesaiti uye nekuunza matambudziko anoda basa rakawandisa kugadzirisa.
Ivo zvakare vakachengeta dingindira rakaparadzaniswa kubva kune iro plugin, zvichigonesa kugona kwemumwe munhu kunyatsoisa iyo nyowani nyowani - nepo ichichengetedza tsika yekuvaka mashandiro kuburikidza neiyo seti yemapulagi. Iyo Musoro weAvada inoyevedza, yakagadzirwa zvakanaka, uye iri nyore kushandira. Joinha anopfuura 380,000 vatengi vakagutsikana mukutenga ino inoshamisa theme!
Tarisa uone Avada Mienzaniso
Our DK New Media Saiti iri paAvada
Kubva kuvaka nzvimbo yekutanga yeAvada, ndanga ndichishandisa iri dingindira kune vese vedu vatengi. Uye, ini pakupedzisira ndakagadzirisa yedu DK New Media saiti futi. Tarisa uone kunaka kwaro - uye zvaive zvisingaite nyore kuvaka uchinyatsoteerera.
Iwo marongero anowanikwa kuburikidza nemusoro wenyaya uyu haaperi, nemazana ezvinhu uye kugona izvo zvinongoita kuti zvive zviroto zvekushandisa. Ini ndinonyanya kuda kuti ndinogona kusevha midziyo uye zvinhu zvekushandisa zvekare pasirese pane mamwe mapeji uchishandisa iyo Fusion Builder. Iyo ndiyo yakanaka peji anovaka system iyo inogadzira CSS faira-inotungamirwa marongero mukati mesaiti pane inline mega mapeji.
Fusion Inovaka Zvimiro Sanganisira
Pre-Yakavakwa Column Mubatanidzwa - Panzvimbo pekuwedzera ikholamu imwe panguva, unogona kusarudza nyore nyore kuwedzera maseti akazara ehukuru hwese hwekolamu hwatinopa kubva pamakoramu 1-6.
Kupunzika Chikamu uye Midziyo - Donhedza chero mudziyo mumwe chete nekutinya kuti uchengetedze skrini zvivakwa, kana kudonhedza midziyo yese kamwechete munzvimbo huru yekudzora bhara.
Dzorerazve Midziyo - Ingo isa chako chitambi muzita remudziyo uye ndokupa zita. Izvi zvinokutendera iwe kukurumidza uye nyore nyore kuziva zvikamu zviri papeji rako nekukasira.
Dhonza uye Kudonhedza Mwana Zvinhu - Zvinhu zvakaita sematebhu, zvemukati mabhokisi, ma toggles uye zvimwe zvinobvumidza zvinopfuura chimwe chinhu kugadzirwa izvozvi zvinogona nyore kugadziriswazve kuburikidza nekukanda uye kudonhedza.
Tsika Mazita eVana Elements - Iyo nyowani Fusion Builder interface inotora zita hombe rechinhu chemwana iwe chaunoisa uye ichichiratidza kuti chive nyore kuzivikanwa.
Tsvaga Rinoshanda kuti Nyore Tsvaga Zvinhu uye Elements - Midziyo yega yega, ikholamu, uye hwindo rezvinhu rine nzvimbo yekutsvaga kumusoro kurudyi kutsvaga nyore uye kuwana zvaunoda nezwi rimwe chete rezwi.
Tenga iyo Avada theme ikozvino
Iyo yakanaka system. Heino rundown yezvakakosha Avada maficha:
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa unozvitutumadza weWeti yepasi apo iyo Musoro weAvada inotengeswa.
Tags: avadaakanakisa wordpress themeFusionfusion muvakifusion themepeji anovakadingindiratheme fusionWordPresswordpress theme
Douglas Karr Tuesday, April 17, 2018 Thursday, October 29, 2020
Is 2018 Iyo Gore Retail Rakafa? Heano Maitiro Ekuchichengetedza
Ungawedzera Sei Masocial Media Engagement